ရွှေရတုမှတ်တမ်း: October 2009
ယမမင်း နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသူ နဲ့ မိတ်ဆက်ရရင်တော့ ဘကျောက် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ..ဒီနှစ် ဘကျောက်တို့ ကြီးမှ ဝက်သက်ပေါက်ပါတယ်၊ တလွဲတော့ မတွေးကြပါနဲ့... လူငယ်တွေ သူ ဘလော့ ကိုယ်ဘလော့ နေကြလို့ ကြီးတောင်ကြီးမား ကြမှ ဘလော့ လိုက်တာ... တခါထဲ ဝက်သက်ပေါက်ပြီး ဘလေဂေတ္တရာပြည် ထဲ ရောက်သွား ပါရောလား......ကြီးမှဝက်သက်ပေါက် တော့ ဝက်ရူးပြန်တာပေါ့လေ...ဝက်ရူးပြန်မှ တော့ အမြှုပ် တစီစီ နဲ့ တက်တက်နေတော့ တာပဲ...
ဘလေဂေတ္တရာပြည် ကလဲ တက်တာတွေ က တယ်ခေတ်စား ပေသကိုး...... ဟော......တလောကတင် ဝဲစားရနံ့ လို့ နာမည်ချိပ်ထားတဲ့ ခွေးသိုးကြီး က ခ ဖေါ် ခွေးသိုး ဆိုပြီး တက်လိုက်တာ....ဗိုင်းတာမ တို့ ကလဲ ဗထက်ချိုင့် ဖေါ် ဗိုင်းတာမ နငယ် ဖေါ် နဝေတိမ်တောင် နဲ့ တပြုံတောင်ကြီး တက်ကြပါရောလား......အရပ်ထဲ က အသုပ်စုံ ရောင်းတဲ့ မခင်ဂွိ တို့တောင် ကြီးကြီးဂွိ ဆိုပြီး အကြော် အလှော် အသုပ် အဖုတ်ဘလော့ ရေးပြီး ဂငယ် ဖေါ် ဂွိ ဆိုပြီး အဖေါ် ကောင်းလိုက်တာ ယောင်္ကျားက ဖေါ်ချင်အုန်း ဟဲ့ ဆိုပြီးအရိုက်ခံ ထားရပါရောလား...ဘကျောက် လဲ အဲဒီတုန်းက ကကြီး ဖေါ် ကိုကိုကျောက် ဆိုပြီး အတက် ကောင်းလိုက်တာ အဝတ်အစားတောင် မကပ်လို့ ခွေးတစီစီ နဲ့ ဖြစ်သွားတာပဲ........
ဘကျောက် ခုမှ နေထိုင်ကောင်းခါရှိသေး အရပ်ထဲ က အိမ်သာ က ဝုန်း.ဒိုင်း..ဂွမ်း..သံတွေ ကြားတာကို ဟိုးလို့ဟောင်းလောင်း ကွင်းပြင် မှာနေတဲ့ အောင့်ဟာငယ် က တွေ့သမျှ လူတွေ လက်တို့ပြီး ..ကမ္ဘာပျက်ပြီ ပြောလိုက်တာနဲ့...တခါထည်း...ဘလေဂေတ္တရာပြည်ကြီး တခုလုံး ငစကောတပ်ကြီး ချီတက် လာပြီ ဆိုတဲ့ အသံကြား သလို ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလိုက် လွှားလိုက် ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲ......
သဂျီးကိုလူထွင်း က သူလေလည်တာပါ ပြောလဲမရ ...ဗမာပြီပြီ..ကြောက်စရာ ရှိရင် သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် ကြောက်လိုက်ကြတာ ဘာပြောကောင်းမလဲ...ပြေးလိုက်ကြတာ ..ဖိုးချက် နဲ့ မိညှက် တို့အတွဲက ရှေ့ဆုံးက အဲဒီ နောက်က ပါနီငပျော့ တို့ ပျင်းတဲ့မယားတို့..ပဒိုင်းပြာ..ယောင်ခြောက်ဆယ်..ဒုက္ခပုံး..မောင်အန်ပုံ..ဗူးနို့..တပြုံတောင်ကြီး ပါလာတာပဲ..နိပွန်ပြည်က အဂ္ဂပဇ္စုန်ရာဇာ ကလဲ ဆားထုပ်ကြီး ဆွဲလို့..မြသီဒါ လဘက် အကြော်စုံ ရောင်းတဲ့ အဖွားဘေသိမ်း တောင် ဘေထုပ် ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး နောက်ကျန် မနေဘူး...... လူအုပ်ကြီး ဒီလောက် ရုံးရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တော့ ဘကျောက် လဲ ဝက်ရူးပြန် ပြီး တခါထဲ သတိကို ပြန်မလည် လာတော့ဘူး....
ဒါနဲ့ ဘကျောက် ခမြာ အဝီစိ ကို online ကနေ လက်မှတ်တောင် ဝယ်စရာ မလိုဘူး ...ဒါရိုက် ရောက်သွားတော့တာပဲ...ရောက်ရောက်ချင်း ယမမင်း နဲ့ appointment တောင် မလိုဘူး...ချက်ချင်းတွေ့ရ တာပဲ.... အမယ် ...ကမ္ဘာပျက်မဲ့ သတင်း ကလဲ အဝီစိမှာ breaking news အနေနဲ့ hit ဖြစ်နေတာ ကိုး....ဖြစ်ရမယ်လေ...အဝီစိ ကလဲ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ basement မှာမို့လား.... ကမ္ဘာမြေကနေ အခုမှ ရောက်လာတဲ့ ဘကျောက် ကို ယမမင်းက အပြတ်ကို ဗျုး တော့ တာပဲ...
ကမ္ဘာပျက် ခါနီး မင်းဘယ်သူနဲ့ နေချင်သလဲတဲ့... ကဲ..မေးလိုက်ပုံက.. အို...ကမ္ဘာပျက်ခါ နီးမှတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မနေချင်ပါဘူး..သူတို့က ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်နေရင် ကိုယ့်မှာ ချော့မော့ နေရတာ အလုပ်ပိုသေး..ဘလေဂေတ္တရာသူ တွေဆို ခုကထဲက တောင်ပြေး မြောက်ပြေး..ပြေးနေကြတာ..ဖြေလိုက်တာပေါ့.. နောက်မေးခွန်းတွေ မှာလဲ ထူးမခြားနားပါပဲ .ကမ္ဘာပျက်မှတော့ ဘာလုပ်လုပ် ဘာတွေးတွေး ဘာရေးရေး အပိုတွေပါ လို့ဆိုတော့....ယမမင်းခမြာ...အနုအရွ ရသ စုံလင်လေး ဖတ်ရမလားလို့ ဘလော့ လည် ထွက်ပါတယ်..တရားတွေရေး..တရားတွေ ပိတ်ဟော နေတဲ့ ဘလော့ထဲ ရောက်သွားသလို..မအီမလည်ကြီး ခံစားနေရတာပေါ့.....
ဒါနဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့....ကဲ..ကဲ...ဘာတွေများ ဥဒါန်းကျုးချင် တုန်းလို့လဲ ဆိုရော....ယမမင်း ကို ယောက္ခမ တော်ချင်ပါတယ် လို့ ဘကျောက်က ဥဒါန်းကျုးလိုက်ရော...ယမမင်းက သမက်တော် ချင်ပုံ မရလို့လား မသိဘူး...သွား...သွား..မင်းနေရာ မင်းပြန် ဆိုတာ နဲ့ ..ဘကျောက် လဲ ဘလေဂေတ္တရာ ကို ပြန်ရောက်လာ တာပါပဲ........
ယမမင်း နဲ့ တွေ့ဆုံခန်း ဤတွင်ပြီး၏။ ။
အောင်သာငယ်ရေးခိုင်း လို့ ရေးရတဲ့ tag post ပါ..တစုံတယောက် ထိခိုက် နစ်နာတယ် ထင်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်..အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ၊ကျွန်တော် blog မရေးခင်က စာလည်ဖတ်ရင် tag တွေကို တခုအပြင် နှစ်ခုမဖတ်ပါ၊blog တိုင်းက ဒါတွေချည့် ဆိုရင် လူ့သဘာဝကအင်မတန် ငြီးငွေ့ပါတယ် ၊tag post တွေက မူလတန်းကလေးစာစီစာကုံးလို ပုံစံခွက်နဲ့ ရေးထားတာမျိုးဆိုရင် ပိုစိတ်ပျက် ပါတယ်၊၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးနိုင်တဲ့blog စာမျက်နှာတွေ ပေါ်မှာရသပေါင်းစုံ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လူငယ်ခြေတက်တွေ အများကြီး မျှော်လင့်ထားပါတယ်.. ။
အခု ဗမာလို တန်ဆောင်မုန်းလထဲ ရောက်လာပါပြီ.... ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ပြက္ခဒိန်မှာ ပါတော်မူနေ့ရယ်လို့ တန်ဆောင်မုန်း လဆန်းလား လပြည့်ကျော်လား ဘယ်နှစ်ရက်မှန်းတော့ မမှတ်မိပါ အမြဲ ပါတတ်ပါသည်...... အင်္ဂလိပ်လို ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ပါ....... အဲဒီနေ့မှာ.... ဗမာဘုရင် သီပေါမင်းနဲ့ မိဖုရားကို အင်္ဂလိပ်တို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား လို့ပါ...........
ဒီအင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ လက်အောက် ကျရောက်ခါနီး အခြေအနေကို ဒဂုန်ခင်ခင်လေးရဲ့ ရည်းစားဓါးပြ (ငယ်ငယ်က ဝင်းဦးတို့ ခင်သန်းနုတို့ ရုပ်ရှင်ရိုက် ပြတာ ကြည့်ဖူးတယ်..) ၊ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ သူ့ကျွန်မခံပြီ တို့မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့် လွန်နှစ်တွေကတော့ သူ့ကျွန်မခံပြီကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ပြတာ တွေ့ဖူးပါရဲ့..... ဒါပေမယ့်.... အင်္ဂလိပ် ရေတပ်နဲ့ မြင်းခြံတိုက်ပွဲမှာ ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့ ဘွားအေကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို ငယ်ငယ်က ပြောပြခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြန်ကြားယောင်မိရင် မကြာမကြာတော့ ပြုံးမိကြောင်းပါ ခင်ဗျာ........
သီပေါမင်း လက်ထက်မှာ အင်္ဂလိပ်ကို ခုခံ ကာကွယ်ဖို့ မြင်းခြံမှာ အောက်မြစ်စဉ် စစ်ကြောင်း ရေတပ်ဌာနချုပ်ကို ဖွင့်ပြီး လှေသင်း အတွင်းဝန် ဦးရွှေမောင်က ကွပ်ကဲ ပါသတဲ့.... အင်္ဂလိပ် ရေတပ်ကလဲ ပခုက္ကူ ကွမ်းရွာ ဆိပ်က ဆန်တက် လာကြပြီး မြင်းခြံ ဆိပ်ကမ်းမှာ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြတာပါ.... ဒီတိုက်ပွဲဟာ အများသိကြတဲ့ အတိုင်း ဗမာတွေ အရေးရှုံး နိမ့်ခဲ့ ကြပြီး... အင်္ဂလိပ် ရေတပ်က မန္တလေး နေပြည်တော်ကို ချီတက် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်......
သူ့ကျွန်မခံပြီ ဇတ်ကားမှာတော့ မင်းသားကြီး ညွန့်ဝင်းက လှေသင်း အတွင်းဝန် လို သရုပ်ဆောင်ပြီး ရိုက်ပြ ထားတာလဲ ကြည့်လိုက်ရပါရဲ့.......
လက်တွေ့ ဒီတိုက်ပွဲ နဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့ ဘွားအေကြီး ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ပြောပြချက်မှာတော့ ဒီလိုဗျ..... အင်္ဂလိပ် ရေတပ်တွေ ချီတက် လာချိန်မှာ ... ဗမာတွေကလဲ ခုခံဖို့ မြင်းခြံ သပြေပင် ဆိပ်မှာ ပြင်ဆင် နေကြပါသတဲ့... ခုခံမယ် ဆိုပြီး ပြင်ဆင် လို့သာ နေတာ လုံလောက်တဲ့ လက်နက်ရယ်လို့ ရှိရှာတာ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး.... အမြောက် နဲနဲနဲ့ ကမ်းနားကစောင့် နေနိုင်တာပါ.... ဒါပေမယ့်... ဗမာထုံးစံ အတိုင်း ရှိတာနဲနဲ .. ပိုပြချင်တာ များများ ဆိုတော့... အမြောက်တွေ အများကြီးနဲ့ အင်္ဂလိပ်ရေတပ်ကို ပြန်ပြီး ခြိမ်းခြောက်နိုင်ဖို့အတွက် .. လူတွေကို.. ကမ်းနားမှာ.. ဖင်ကို ထုံးနဲ့ ဝလုံးကွင်းပြီး.. လေးဘက် ကုန်းခိုင်း ထားပါသတဲ့.... အဝေးက ကြည့်ရင်.. အမြောက်တွေ တန်းစီ နေတာပေါ့လေ......
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကလေးဆိုတော့ ဘွားအေကြီး ပြောတာ အလွန် သဘောကျပေါ့ဗျာ.... ဖင်ကို ဝလုံးကွင်းပြီး ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်လို့ အင်္ဂလိပ်ကို ခြိမ်းခြောက် ပြနေတာကိုး.... အင်္ဂလိပ်ကလဲ ပစ္စည်း၊ လက်နက်၊ လူ အင်အား အပြည့်အစုံနဲ့ ချီတက် လာတာပဲ.... အင်္ဂလ်ိပ် ရေတပ်က မှန်ပြောင်းနဲ့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့.... ကမ်းနားမှာ လူတွေ လေးဘက်ကုန်းနေတာ မြင်ရပါသတဲ့ . (ကြည့်စမ်း... ကျွန်တော့ ဘွားအေကြီးက အင်္ဂလိပ်ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို သူကိုယ်တိုင် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတိုင်းပဲ ပြောနေ လိုက်တာ..းဝ ) အဲဒီတော့ ကမ်းနားက လူတွေကျော်ပြီး မြို့ဖက်ကို အမြောက်နဲ့ ထုပါသတဲ့... ကျွန်တော့ ဘွားအေကြီးတို့ ကတော့ တိုက်ပွဲ ကာလမှာ ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းပါးမှာ ဝပ်နေကြရ ပါသတဲ့.. တခြားလဲ ပြေးစရာက မရှိဘူးလေ...... အင်္ဂလိပ်ရေတပ်က .. အမြောက်နဲ့ တလစပ်လဲ ထုရော ... ဗမာ့သတ္တိပဲ... ဘယ်ခေမလဲ.. မြစ်ကမ်းပါးမှာ ဖင်ဝလုံးကွင်းပြီး လေးဘက်ကုန်း နေရာကနေ ထွက်ပြေးလိုက်ကြတာ.... မြို့အရှေ့ဘက်က ကျောက်ရံကုန်း ရောက်ရောဆိုပဲ......
အဲဒါနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်တပ်က မြင်းခြံ ကို သိမ်းပိုက်မိတယ် ဆိုပါတယ်.......မြို့သိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ မြို့မြောက်ဖျား သံလျက်စွန်း ကစလို့ မီးရှို့ပစ် ပါသတဲ့ ..ကျွန်တော့ဘွားအေကြီး ကတော့ ကုလားမီးကြီး လို့ ဆိုပါတယ်..နောက်မှမြို့ကွက်ရိုက်ပြီး လမ်းတွေ၊ မီးနဲ့ ရေပေးစနစ်တွေ..စနစ်တကျ စီစဉ်ပေးပါသတဲ့...တမြို့လုံး မီးလောင်နေချိန်မှာ မိသားစု တစုကတော့ သူတို့တိုက်က မီးခံတိုက် ဆိုပြီး တံခါးပိတ်ပြီး တိုက်ထဲမှာ နေကြပါသတဲ့ ..တိုက်ကတော့ မီးခံ ပါရဲ့ လူက မီးမခံတော့ တမိသားစုလုံး နံပြားဖုတ်ထား သလိုပါပဲ......
မန္တလေးနေပြည်တော်ကို အင်္ဂလိပ်က သိမ်းပြီးတဲ့နောက် သီပေါဘုရင်နဲ့ အဖွဲ့ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကနေ သင်္ဘောနဲ့ ခေါ်လာတော့လဲ ကျွန်တော့ ဘွားအေကြီး တို့က ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းနဘေးကနေ ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ ကြိုကြရသတဲ့... ဘုရင်ကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောလာချိန်မှာ ရေစပ်မှာ ပန်းအိုးလေး တွေ ချ ဒူးတုပ်ပြီး လက်အုပ် ချီ နေကြပါသတဲ့...သင်္ဘောက အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရေလည်က မောင်းသွားတော့ ...ရေလှိုင်းတွေက ကမ်းစပ်ကို လာရိုက်တဲ့ အခါ ပန်းအိုးတွေ အကုန် မြစ်ထဲ မျောပါ ကုန်တော့တာပေါ့....မြို့သူမြို့သားတွေက ဘုရင် မရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး ငိုကြပါသတဲ့.....
ကျွန်တော် ကတော့ သူ့ကျွန်မခံပြီ ဇတ်ကားမှာ ဘွားအေကြီး ကိုယ်တွေ့လိုများ ရိုက်ပြမလား လို့ တွေးထင် ကြည့်မိပါတယ်.. ညွန့်ဝင်းကြီး ကျောက်ရံ ကိုထွက်ပြေးခန်းတော့ ပါတယ်..ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန် အမြောက်တော့ မပါဘူး ခင်ဗျ..... ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည် ကိုလိုနီ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေ ထဲမှာ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား ရဲ့ ခေတ်မမှီမှု၊ ဉာဏ်အမျှော်အမြင် နဲပါးမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်တခွဲသား ဖြစ်နေမှု တွေ အများဆုံး ပါပါတယ်...အုတ်တံတိုင်း လေးဘက် ကာရန်ထားတဲ့ မန္တလေးနန်းတော် ထဲက ဘယ်မှမထွက် ..ခေတ်မှီ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ..ကမ္ဘာကြီးကို မကြည့်ဘဲ ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ျာ တောင်ကျွန်း ရဲ့ ဗဟိုလ် ချက်မ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဖာသာ အော်နေကြတာပါ......
ခုချိန်မှာလည်း အဲဒီလိုမျိုး အင်္ဂလိပ် ရေတပ် ကသာလာရင် ကျွန်တော်တို့ ဘဘ ဘိုချုပ်ကြီးတွေ ဖင်ကို ထုံးနဲ့ ဝလုံးကွင်း လေးဘက်ကုန်း ပြီး အမြောက် ယောင် ဆောင် နေကြဦး မလား မသိပါခင်ဗျာ.........
(Florida ကPalm city မှာ နေတဲ့ ကျောက်ခဲ နှမငယ် မဝေ က ကြားဖူးနားဝ ရှေးစကားလေးတွေ ရေးပါဦး ဆိုလို့ ရေးလိုက်ပါတယ် )
Posted by ရွှေရတုမှတ်တမ်း at 3:05 AM
ဒီဗူဒူးရုပ် တွေနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ပတ်သက်စရာ အကြောင်းမရှိ သလို ပတ်သက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထင် ခဲ့မိတာ အမှန်ပါ ခင်ဗျား.......ကျွန်တော့ကို တိုက်ရိုက် မဟုတ် ပေမယ့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ရောက်မှ သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်လာတဲ့ အကြောင်း ကိုတော့ ရေးပြဦးမယ်ခင်ဗျာ.........ဒီ ဗူဒူးရုပ်တွေ ရဲ့ နဂို ဇာတိ ဟာ အာဖရိကတိုက် ကလို့ အဆိုရှိပါတယ်... ကိုယ် ပြုစားချင် တဲ့ လူကို ဒီ ဗူဒူးရုပ် နဲ့ ပြုစားပြီး အရုပ်ကို အပ်တွေနဲ့ ထိုးတာလဲ ရုပ်ရှင်ထဲ မှာကြည့်ဖူးပါရဲ့......ဂျိမ်းစဘွန်း ဇတ်ကား Live and Let Die မှာတောင် ပါသေး...... ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ် ထဲ က Hati ကျွန်းမှာ တော့ အတော်ခေတ်စားတယ်ဆိုပဲ......
ကဲ ..ဒီ ဗူဒူး တွေနဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ အမှတ်မထင် နှီးနွယ်ခဲ့ရပုံ ကတော့ ဒီလိုခင်ဗျ ...........
၂၀၀ဂ ခုနှစ် ဆန်းလောက်က ကျွန်တော် Texas ပြည်နယ် San Antonio မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ နေခဲ့ဖူးတယ် ခင်ဗျ.. .. Texas ပြည်နယ် က Mexico နဲ့ က နယ်စပ်ချင်း ကဆက်စပ်နေလေ တော့ Spanish စကားပြော သူက ၇၅% လောက်ရှိတယ်....ကျွန်တော်မှာ လည်း ကိုယ့်ဖေါက်သည်တွေ က Mexican အနွယ်တွေ ဆိုတော့....ကိုမိုစတား (နေကောင်းလား) ၊ မူချို ကရာ့စီးယာ့စ် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် )..တို့ ပြောနေရတာ လက်ကို မလည်နိုင်အောင်ပါပဲ......Texas ပြည်နယ် ဆိုတာကလဲ..ဗမာပြည်လောက် ကျယ်ဝန်းတာမို့ အင်မတန်ကြီးတဲ့ ပြည်နယ်ကြီးပါ.... ရာသီဥတု ကလည်း ကျွန်တော် တို့ ဗမာပြည် အလယ်ပိုင်းလိုပဲ...နေကပူ..ဖုန်ကထူ (အညာသံနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်...ဖုတ်ကထူ...းဝ ) ..နယ်ကလဲ ကောင်းဘွိုင်နယ် ဆိုတော့...စရိုက် ကကြမ်း.... Texas က pawn shop လို့ ဆိုရင် အပေါင်ဆိုင်တော့ အပေါင်ဆိုင်ပဲ....လာပေါင်တဲ့ ပစ္စည်းက သေနတ် ချည့်ပဲမို့....pawn shop မှာ အပေါင်ဆုံး ပစ္စည်း ဝယ်ချင်ရင် သေနတ် ပဲ ရမယ်.... ကျွန်တော်တောင် ရောက်စက သေနတ်တလက် ဝယ်ကိုင်မလို့... နောက်တော့..ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ပဲ.. စိတ်ထိမ်း..စိတ်ထိမ်း..ဆိုပြီး..ငြိမ်ငြိမ်ပဲ နေလိုက်ပါတယ်....
ကဲ..ပါလေ.. ဗူးဒူးရုပ် အကြောင်း ပြန်ဆက်ကြပါစို့.... အဲဒီ ဗူဒူးရုပ် နဲ့ ပြုစားတာဟာ..လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတွေကနေ Texas တောနယ်တွေမှာ အထိ ရှိတတ်တယ် လို့ ကြားဖူးခဲ့တာပေါ့လေ...... ဒီနှစ် ၂၀၀၉ မတ် လ ပိုင်း လောက်က ..အလယ်ပိုင်းဒေသ...Utah ပြည်နယ် Salt Lake City က ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့ကောင်မလေး မလေးရှားကနေ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့် ရလာတော့ Texas ဘက်ကို honeymoon လာခဲ့မယ်ပေါ့..... OK လာခဲ့ပေါ့.... အဲဒါနဲ့ ..သူတို့စုံတွဲ ...Utah ကနေ Texas ရောက်အောင် မိုင် ၁၃၀၀ လောက် မောင်းလာခဲ့ ကြတာပေါ့..... Texas ပြည်နယ် ထဲရောက်လို့ အမှတ် ၁၀ အမြန်လမ်းမ ကြီးပေါ်မှာ... car accident ဖြစ်ပါတယ်..... လူတွေ ဘာမှထိခိုက် နာကျင် မှု မရှိပါဘူး...ဘယ်ကားနဲ့ မှလဲ တိုက်မိတာ မဟုတ်ပါဘူး....
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုခင်ဗျ..... Van Hom ဆိုတဲ့ မြို့လေး အလွန်မှာပေါ့ခင်ဗျာ..... သူတို့ အပြောအရ ဆိုရင်...ကားဟာမောင်းနေရင်း လမ်းဘေးကို.. တစုံတယောက်က စတီယာရင် ကို အတင်းဆွဲချသလို ခံစားရ ပါသတဲ့...ကားကို လမ်းပေါ်ကို ဘယ်လို ဆွဲတင်ဆွဲတင် စတီယာရင် ဟာ လုံးဝ လှည့်လို့ မရပါဘူးတဲ့.....ဒါနဲ့..အသွားအပြန် လမ်းနှစ်လမ်းကြား မြောင်းထဲ ကို ထိုးဆင်းသွားပြီး ချက်ချင်း လမ်းပေါ် ကို ပြန်မောင်းတက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်..... လမ်းပေါ်မှာ အရေးပေါ် မီးဖွင့် ပြီး ကားပေါ်က ဆင်းကြည့်လိုက်တော့.....ကားနောက်မှန်တခုလုံး ကွဲကြေနေပြီး..ကားနောက်ခန်း အမိုးကလည်း နို့ဆီခွက် ကို ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ထားသလို ပိန်လိန်နေတာပါပဲ... နောက်ခုံမှာ လူထိုင်ရင်တော့ ..ပွဲချင်းပြီးပေါ့လေ... သူ့ကားက ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကထုတ်တဲ့..Dodge Charger ...ကားသက်ကလည်း တနှစ် ပဲရှိသေးတာမို့ ဗမာပြည် က ဂျုံးဂျုံးကျ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကပ္ပိယရဲ့ အဖိုးတဝမ်းကွဲ ပိုင် ၁၉၄၀ ခုနှစ် model ဒေါ့ ဂျစ် ထက်တော့ အများကြီးလတ်ပါတယ်....
အဲဒီ အချိန်မှာ.... ရဲ ကား ရောက်လာပြီး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ ပေးဖို့မေးပါသတဲ့..( ဗမာပြည်က ရဲတွေ အတိုင်းပဲနော်..း))... ဗမာပြည်တုန်းက field ထဲမှာ ကားဘရိတ်ပေါက်ပြီး လမ်းဘေး ကျသွားတာ..လာတဲ့ ရဲ ကို ကားပေါ်ပါလာတဲ့ ဆန်တအိတ် ပေးခဲ့ရသေးတယ် ..ကိုယ်ကပဲ ..သူတို့ကို..ကူညီပါရစေ ကူညီပါရစေ ခင်ဗျ ..လို့ပြောခဲ့ရတာ )... ရဲတွေ ကလည်း ဘာနဲ့မှ လဲတိုက်ထားတာ..ခိုက်ထားတာ..မရှိပဲ ကားက အသားလွတ် နောက် ထိုင်ခုံအမိုး ချိုင့်ဝင် ပိန်ရှုံ့ နေတာကို.. သူတို့လဲ စဉ်းစားရခက်နေတယ်... ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းစုံတွဲ ကလည်း ..လမ်းဘေး ..မြက်ခင်း မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေကြတာပေါ့... ထိုင်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း ထိုင်နေတဲ့တင်ပါး အောက်ကနေ တစုံတခု ရွစိရွစိ သွားနေသလို ခံစားရတာမို့ တင်ပါးအောက်ကို စမ်းကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့......လက်ထပ်စိန်လက်စွပ် တကွင်း တွေ့ရတာပါပဲ....
သူကလည်း အဲဒီလက်စွပ် ကို သူ့ကောင်မလေး ကို စွပ်ပေးလိုက်ချိန်ခိုက်မှာပဲ........ကားအောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ ..ရဲ က...OH..my goddess.....ဆိုတဲ့ အော်သံကြား လို့ ကြည့် လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့........... ကား အောက်ကနေ ဗူဒူးရုပ် တရုပ် ထွက်လာတော့ တာပါပဲ..... ဒါနဲ့ ရဲက ဒါမကောင်းဘူး ဆိုပြီး ..သူ့ဘိနပ်နဲ့ နင်းခြေ ပစ်လိုက်ပါတယ်..... ဒီ ဗူဒူးရုပ်ဟာ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ကားအောက်ရောက်နေသလဲ...ကားအောက်ကနေ ဘယ်လို ထွက်လာသလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှတွေးမရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်...ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း က အနီးဝန်းကျင်..ဟိုဟို သည်သည် လျှောက်ကြည့်တော့ .. အဲဒီနားမှာ ပျက်စီးနေတဲ့ ကား ဘော်ဒီ အစိတ်အပိုင်း တချို့ နဲ့ ကားမှန်ကွဲ အစအနတွေ တွေ့ ရတာမို့ တချိန်တခါက ဒီနေရာမှာ မတော်တဆ မှု တခု ဖြစ်ခဲ့ဖူး မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါသတဲ့...........
ဒါနဲ့ အဲဒီကားကို San Antonio ရောက်အောင် မောင်းတော့ လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်....အဲဒီနေရာနဲ့ ဆို မိုင် ၄၀၀ ခရီးမို့ ရန်ကုန် မန္တလေး လောက်တော့ မောင်းရပါသေးတယ်..... San Antonio ရောက်တော့...workshop မှာ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ ကားအောက်ပိုင်း တခုလုံး စုတ်ပြတ်နေပြီး သည်လောက် စုတ်ပြတ်နေတာနဲ့ မိုင် ၄၀၀ လောက် မောင်းလာ နိုင်တာ တအံ့တသြော ဖြစ်နေကြတယ်.......San Antonio ရောက်လာပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာ......သူတို့ကားက bodyshop ကို ပို့ထားရတော့ သူတို့ သွားစရာ လာစရာ ရှိရင် တျွန်တော်ပဲ လိုက်မောင်းပို့ပေးရတာပေါ့.... အမေရိက ဆိုတာကလည်း ကားမရှိရင် ခြေထောက်မရှိသလို ပဲလေ...နယူးယောက် ကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ သူတောင်းစားတောင် ကားမရှိရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာ သွားတောင်းဖို့ သိတ်မလွယ်ကူ လှပါဘူး။
သူတို့ ရောက်ပြီး နောက်တရက် မှာပေါ့ခင်ဗျာ... သူတို့ အတွဲက မြို့ထဲ က Catholic Charity ကို သွားစရာ ကိစ္စကလဲ ရှိတယ်.....အဲဒီတော့ ကျွန်တော်က လိုက်ပို့တယ်...သိတ်မဝေးပါဘူး.. ၆ မိုင် ၇ မိုင် လောက်ပါပဲ ကောင်မလေး ကလဲ လမ်းကကောက်ရ တဲ့ လက်ထပ် စိန်လက်စွပ်ကြီး တဝင်းဝင်းနဲ့ ..တကယ်တော့ တရားဝင် Church မှာ လက်မထပ်ရသေးဘူး..... Catholic Charity ရုံးနားရောက်တော့... ရုံးဘက်ကို ဘယ်ကွေ့ ပြီး ဝင်ရမယ်.. အမေရိက မှာ က ဗမာပြည်လို လင်္ကျာကပ်မောင်း .... ကျွန်တော် လဲ ဘယ်ကွေ့လိုက်ရော...တဖက် ယာဉ်ကြော ကို ကန့်လန့်ဖြစ်နေချိန်မှာ....ကျွန်တော်ကား ဟာ လီဘာ ဘယ်လို နင်းနင်း ရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲ... တဘက်ကလာတဲ့ ယာဉ်ကြော ကို ကန့်လန့်ခံပေးထားတယ်.... ကားက ချူချာတယ် ဆိုရအောင်လဲ .. ကျွန်တော့ကားက ၂၀၀၉ model Toyota Corolla အသစ်...မိုင် ၅၀၀ ပြည့်အောင်တောင် ..မမောင်းရသေး.... တဘက်က အရှိန်နဲ့ ပြေးလာတဲ့ ကားတွေကလဲ ..တကယ့် heavy truck ကြီးတွေ.. Texas မှာက ကျွန်တော် လို ကားအသေးစီးတဲ့ သူက ရှားပါဘိခြင်း... လူအတော်များများက truck တွေစီးကြတာ ..ဘယ်ကားကြည့်ကြည့် ..တိုက်ထား တာလဲ ..ပိန်လိန်နေတာပဲ..car insurance ကလဲ တခြားပြည်နယ်တွေ ထက် ၂ ဆ.... လမ်းလယ်မှာ ကန့်လန့်ခံနေတဲ့ ကျွန်တော့ကားကြောင့် တဖက်က ကားတွေ ပြာရီးပြာယာ ဘရိတ် အုပ်ကြတော့... နောက်ခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေး ကို တိုက်မိဖို့ တပေ လောက်ပဲ ဝေးပါတော့တယ်....ကားတွေ အားလုံးရပ် သွားမှ ကျွန်တော့ ကားလဲ ဝေါကနဲ ..ဆက်ထွက်သွားတော့ တယ်... ကားမောင်းလာတဲ့ သက်တန်းတလျှောက် ..ဒီလိုမျိုး တခါမှ မကြုံဘူး တာမို့ ..ကျွန်တော်ဖြင့် ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှန်း မသိအောင်ပါပဲ..... သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး လဲ ..အဲဒီစိန်လက်စွပ် ကို ဝတ်ဖို့နေနေသာသာ ..ကိုင်တောင် မကြည့်ရဲဘူး ဖြစ်သွားတယ်.....
အဲဒီ ဗူဒူး ရုပ် ရယ်..လက်ထပ် စိန်လက်စွပ်ရယ်...ကြင်စဦး မောင်နှံရယ်..ဘယ်လို ဆက်စပ်မှု ရှိကြတယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် ခုထိ အဖြေရှာလို့ မရသေးပါခင်ဗျာ......
+ညီတော်မောင် ကိုလူထွေးက ပုံပြင်ပြောတမ်း ကစားနေပြီဗျာ... သူ့ blog မှာဝင်ပြီး ပုံပြင်ပြောရမှာတဲ့..... ကျွန်တော် ကတော့ လူကြီးဆိုတော့ ကိုယ်ကြားဖူး နားဝ ပုံပြင်တွေနဲ့ ကလေးတွေကို ခပ်တည်တည် ပြောရမှာပေါ့ဗျာ...............
ကိုင်း...ကိုင်း.......နားထောင်ကြ............ ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ဘလော်ဂါနသီပြည်ကြီးမှာ မောင်ကျောက်ကျိုင်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ရှိသတဲ့ကွယ်.... မောင်ကျောက်ကျိုင်းလေး အရွယ်ရောက် လာတော့ မိဘများက တက္ကသီလာပြည်ကြီး ကို စေလွှတ်ပြီး ပညာ သင်စေ တာပေါ့ကွယ်.... မောင်ကျောက်ကျိုင်းဟာ လက်ခုပ်ပန်းနဲ့ ခွေးသေးပန်းတို့ ပွင့်ရာ တက္ကသီလာပြည်ကြီး မှာ ယောင်္ကျာံးတို့ တပ်အပ် တဆယ့်ရှစ်ရပ် ပညာတွေကို သင်ကြား ပါသတဲ့ကွယ်... ပညာသင်ချိန်မှာ သက်သတ်လွတ် အရည်သာ သောက်သုံးခြင်း .. ကုမ္မာရီ အဆောင်သူ လေးများ နှင့် မောင်နှမဆောင် တော်စပ်သော သင်္ဂဟအဆောင် များကို ယောက်ဖဆောင် တော်စပ်ပြီး မိတ်သင်္ဂဟများနှင့် ဂဏန်းသင်္ချာများ ကို နေ့မအိပ် ညမအိပ် တွက်ချက် လေ့ကျင့်ကြခြင်း...... ဂီတ သင်ခန်းစာများကို ကုမ္မာရီ အဆောင်များ ရှေ့တွင် .. အော်ဟစ် လေ့ကျင့်ခြင်း.. စသည်တို့ဖြင့် တက္ကသီလာပြည်ကြီး မှာ အချိန်တွေ ကုန်လွန်စေပါသတဲ့ကွယ်.....
ဒီလိုနဲ့ တက္ကသီလာပြည်ကြီး မှာ နှစ်တွေ ကြာညောင်း ခဲ့ပေမဲ့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ ဘာမျှ မယ်မယ်ရရ ပညာ မတတ်ခဲ့ ရှာပါဘူးကွယ်..... ဒီတော့.. ဘာမှမတတ်တဲ့ မောင်ကျောက်ကျိုင်းကို သူ့ဆရာ ဒိသာပါမုတ်ခကြီး ကစကားကြီး သုံး ခွန်း ပဲသင်ပေးပြီး ပြန်လွှတ် လိုက်ပါသတဲ့......အဲဒီစကားတွေ ကတော့.... မေးပါများ စကားရတဲ့.... သွားပါများ ခရီးရောက်တဲ့.... မအိပ်မနေ အသက်ရှည်တဲ့...
မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ ဆရာကြီး စကားကို တသွေမတိမ်း နားထောင်ပြီး ဆရာကြီး စကား အတိုင်း ကျင့်ကြံ တာပေါ့ကွယ်..... မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဆိုတဲ့အတိုင်း... ည.. ည...မှာ မအိပ်ပဲ ကွန်ပြူတာ တလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုတ် နေတာပေါ့ကွယ်... မေးပါများ စကားရ ဆိုတဲ့ အတိုင်း... နေကောင်းလား.....တို့.. ဝမ်းမှန်ရဲ့လားတို့.... လမ်းသလား နေတာ မတွေ့တာ ကြာပြီတို့... ဘာတို့ ညာတို့ .. သူများတွေကို .. စကားလေးများ ရအောင် မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ သွားသွား မေးရရှာသတဲ့........
သွားပါများခရီးရောက် .. ဆိုတဲ့အတိုင်း.. မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ.... ဂန္ဓာရီ လှည့်တယ် ဆိုပြီး.... အရပ်တကာ လျှောက်လည်တော့ တာပါပဲကွယ်... ဘလောက်ဂါနသီပြည်ကြီး ထဲမှာ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် လျှောက်သွားတာ ပေါ့ကွယ်.. တချို့ အိမ်တွေကို ဝင်လည်မလို့ လမ်းထဲဝင်လိုက် တာနဲ့ အကြော်အလှော် နံ့တွေက ထောင်းထောင်းထနေ တာပါပဲကွယ်.. ချက်သံ ပြုတ်သံတွေ ပွက်ပွက်ညံနေပြီး တအိမ်နဲ့ တအိမ် လှမ်းပြီးတော့ မမရဲ့ ပဒိုင်းပွင့် လက်သုတ်လေး စားကြည့်ရရင် သိတ်ကောင်း မှာပဲတို့ ... ညီမလေးရဲ့ မန္တလေးမုန့်တီ နဲ့ အပြိုင် .. သာကေတမုန့်သန်ကောင်.. က မြည်းကြည့် ချင်စရာပဲတို့............... မမရဲ့ မုန့်ပေါင်းကြီး ကမှ .. အရသာရှိမယ့်ပုံပါ မမရဲ့ တို့..... အို... ညီမလေးရဲ့ နံပြားလောက်.. ရွတာ.. မရှိဘူးတို့... တဦးနဲ့တဦး ပန်းကန်တွေ လှမ်းပြပြီး ပြောနေကြတော့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ မစားရ ညှော်ခံတွေမို့ အသာပြန်ထွက် ပြေးလာသတဲ့ကွယ်.......
တချို့အိမ်တွေ နားရောက်တော့ အိမ်တွေထဲက အာပေါင်အာရင်း သန်သန်နဲ့ ချာရာနသီပြည်ကြီး က ဗါမတတ်မင်းကြီး ရဲ့ အသုံးမကျပုံတွေ ပြောနေတာ ကြားရပါသတဲ့ကွယ်.. အိမ်ပေါ်မှာလည်း ဗါမတတ်မင်းကြီး ရဲ့ တပည့် အာတာလွတ် အမတ်ရှုတ်ကြီး နဲ့ အဖွဲ့တို့ ဆယ်အိမ်ခေါင်း အစည်းအဝေး လာတက်တုန်း ပေါသွတ်တို့ အဖွဲ့က ခုံဘိနပ် နဲ့ ပေါက်နေပုံတွေ တခန်းတနား ချိပ်ပြ ထားတာ မြင်ရလို့ .. မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ အိမ်ပေါ် မတက်ရဲတာနဲ့ ပြန်လှည့်ထွက်လာ သတဲ့ကွယ်..........
ဒါနဲ့.. မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ နောက်တလမ်း ကို သွားတော့ သာယာနာပျော်ဘွယ် အလင်္ကာတွေ ရွတ်ဆို နေကြတဲ့ အိမ်တန်းတွေ ဖြတ်လျှောက်မိတာ ပေါ့ကွယ်.. .ခက်တာက.. မောင်ကျောက်ကျိဲုင်း ခမြာ နဂို ကမှ ဉာဏ်နဲ ရှာလေတော့... သူတို့ ဘာတွေ ရွတ်ပြနေသလဲ ဆိုတာ နားမလည် ရှာပါဘူးကွယ်..... သူတို့အိမ်တန်းက မငွေတောင် ဆီ ဝင်လည်မလို့ လုပ်တော့ နဂါးလှည့် မသင့်ဘူး ဆိုလား နာလံမထ တော့ဘူး ဆိုလား ... ပြောသံကြား လို့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ လှေခါးရင်း ကပဲ ပြန်လှည့် လာသတဲ့ကွယ်...........
သွားပါများ ခရီးရောက် ထုံးကို နှလုံးပြု ပြီး လျောက်လာလိုက်တာ.. မောင်ကျောက်ကျိုင်းရဲ့ ဂျီးတော်ကြီး အိမ်ရှေ့ ရောက် ပါရောလားကွယ်... နှုတ်ဆက်မလို့ အိမ်ထဲ ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးတွေ ပွက်ပွက်ညံ အောင် ဆော့နေကြလို့ မဝင်တော့ပါဘူးတဲ့ကွယ်... ကလေးတွေ ကတော့ ဂျီးတော်ကြီး အိမ်ထဲမှာ ဆဲတဲ့ ကောင်က ဆဲ.. ရန်ဖြစ်တဲ့ ကောင်က ဖြစ် မို့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ ခပ်သုတ်သုတ် ဖြတ်လျောက် ရတာပေါ့ကွယ်.........
ဒီလိုနဲ့.. ဆိပ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေး ထဲ ရောက်ပြန်တော့...တချို့အိမ်တွေ ဝင်လည် ပြီး စကားစမြည် တွေနားထောင် တဲ့အခါ ... မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ ဘွားအေကြီးနဲ့ ပြန်တွေ့ ရလို ခံစားမိရှာ သတဲ့ကွယ်.... မောင်ကျောက်ကျိုင်း ဘွားအေကြီး ကလဲ အသက် ရှစ်ဆယ် ကျော်ပေမယ့် ...... ငယ်ငယ်တုန်းက.. တက္ကသီလာပြည်မှာ.. ပွင့်တဲ့ လက်ခုတ်ပန်းလေး တွေ အကြောင်း... ကို ခုထိ အမှတ်တရ ပြောနေဆဲ ပါတဲ့ကွယ်... ဘွားအေကြီး ပုရပိုဒ်တွေ ရေးဖွဲစဉ်က.. ဂေါရီဆောင်က.. ဖွါးပုတို့.. ဖွါးဂွိတို့.. ဖွါးဂွက်တို့ အကြောင်းတွေ.... တက္ကသီလာပြည်ကြီးမှာ ဆိုက်ကားစီးပြီး လျှောက်လည် ရ တာ အလွန်ပျော်စရာ ကောင်းကြောင်း ရေးဖွဲ့ခဲ့ပုံတွေ အမြဲပြန်ပြော တတ်တာမို့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ .. ဘွားအေကြီးကို သတိရလို့ မျက်ရည်များတောင် လည်မိပါသတဲ့ကွယ်..........
ဒီလိုနဲ့ ဘလော့ဂါနသီ နန်းတော် နားကိုရောက်လာ တာပေါ့ကွယ်.... နန်းတော်နားမှာ ချာရာနသီပြည်က ဗါမတတ်မင်းကြီး လက်စွဲတော် စိုင်တမော့ တို့အုပ်စု အိမ်ဝယ်နေတာ တွေ့ပေမဲ့ ဝင်မကြည့် ပါဘူးတဲ့ကွယ်.......
မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ နန်းတော်ပေါက်ဝ ရောက်ရော လူတယောက် ထွက်လာပြီး ဟိုင်း လို့ နှုတ်ဆက်ပါ သတဲ့ကွယ်... မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ သူ့ကို ဟိုင်း သွားပြီလို့ ပြောတယ်ထင်ပြီး မလုံမလဲ ဖြစ်သွားရှာ သတဲ့ကွယ် ...အဲဒီလူ က မောင်ကျောက်ကျိုင်းကို မိန်းမ လိုချင်လို့ ဘလော့ဂါနန်းတော် ထဲ လာသလားလို့ မေးလိုက် ပါသတဲ့ကွယ်... မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမျာ အဲလို ကူလီကူမာ စိတ်မျိုးတော့ မရှိရှာပါဘူးကွယ်... နန်းတော်ထဲ မှာ ဘုရင်နေရာ ဗေကင်စီ ဖြစ်ပြီ ... မင်း.. ဘုရင် လုပ်ချင်ရင် မိန်းမ ယူရမယ် လို့ ဆက်ပြော သတဲ့ကွယ်... .မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ ဘုရင်လဲဖြစ် မိန်းမလဲရ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့..... ဒါနဲ့.. ဒီမှာ ခင်ဗျားက.. ဘာလဲဗျ လို့ မေးတော့ အဲဒီလူက ငါက ဒီမှာ မူလလက်ဟောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး.... မင်း .. ဒီမှာ ပုံစံ ဖြည့်လို့ ရတယ်... လူ ၃၅၀ ဖြည့်ပြီးပြီ... ဒီလ ၂၉ ရက် နောက်ဆုံးပဲ လို့ပြောလို့... မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ ဝင်းသူဇာဆိုင်မှာ ဈေးဝယ်ရင် ဆပ်ပြာ နဲ့ မီးချစ်ပုံး တွဲပေးသလိုမျိုး ဘုရင်ရာထူး နဲ့ မိန်းမ တွဲပေးတာ ရဖို့ ပြာရီးပြာယာ နဲ့ ပုံစံ ဖြည့်လိုက် ပါသတဲ့ကွယ်... ပုံစံလဲ ဖြည့်ပြီးရော အခုချက်ချင်း မင်းကို ဘုရင် ခန့်လိုက်ပြီ ပြောတော့ မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ အလန့်တကြားတောင် ဖြစ်သွားပါသတဲ့ကွယ်....
ဒါနဲ့..မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ ဘုရင်ရာထူး ကို လက်ခံပြီး သမီးတော် ခင်ဝက်ပုရွှေ ကို ယူလိုက် ရတာပေါ့ကွယ်... မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ စိန်တွေကတော့ ဘယ်က ရသလဲတော့ ကိုကြီးကျောက်ခဲ လဲ မပြောတတ်ဘူးကွယ်... မင်္ဂလာဦးညမှာ.. မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ ဘော်ဒါတွေကို.. ကာရာအိုကေတို့.. အနှိပ်ခန်းတို့ .. လိုက်ပို့နေရလို့ နန်းတော် အပြန် နောက်ကျ နေတာပေါ့ကွယ်... သူလဲ နန်းတော် ရောက်လို့ အခန်းထဲလဲ ဝင်လိုက်ရော သလွန်ပေါ်မှာ မြွေကြီးတကောင် တွေ့ပါသတဲ့ကွယ် ... မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ တရုတ်ပြည်နဲ့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကို စိတ်ဝင်စား တာမို့ မြွေကို ဖမ်းမလို့ တုတ်နဲ့ ရိုက်တာ စွမ်းအားရှင်တုတ် ဖြစ်နေလို့ မြွေလဲ တခါတည်း အသက်ထွက် သွားသတဲ့ကွယ်...
အဲသည် အချိန်မှာပဲ မိဖုယားကြီး ခင်ဝက်ပုရွှေ ရောက်လာပြီး သူအလှမွေး ထားတဲ့ မြွေ ကို သတ်ပစ်လေခြင်း ဆိုပြီး ဒေါသပုန် ထတော့တာပေါ့ကွယ်... မောင်ကျောက်ကျိုင်းရဲ့ ခေါင်းအုန်း နဲ့ စောင်တွေ အခန်းအပြင် လွှင့်ပစ်ပြီး... အခန်းတံခါးကို ဝုန်းဆိုပိတ်လိုက် ပါသတဲ့ကွယ်...မောင်ကျောက်ကျိုင်း ခမြာ မင်္ဂလာဦးညမှာ မီးကင်းသွားစောင့် ရမလို ဘာလိုလို ဖြစ်သွားရသတဲ့ကွယ်....
နောက်တနေ့ မနက်ကြ တော့ မိဖုယားကြီးက ဘလော့ဂါ ပဟေဠိ အဖြေညှိ ခိုင်းသတဲ့ကွယ်....... ထောင်ပေးလို့ဆုတ်.... ရာပေးလို့ချုပ်....... ချစ်တဲ့သူအရိုး ဆံထိုးလုပ်.. တဲ့ကွယ်.... မောင်ကျောက်ကျိုင်း လဲ ခေါင်းနဲနဲ စားသွားတာပေါ့ကွယ်.... မိဖုယားကြီးက ဘာတွေ ချုပ်ချင်မှန်း မသိ..ဘာကို ထောင်ပေးရလို့ ဘာကို ဆုပ်ချင်မှန်း မသိတော့ ... စိတ်လေလေနဲ့ ဘီယာဆိုင်မှာ သွားထိုင်နေတာပေါ့ .... အဲဒီအချိန်မှာ.. ဘီယာဆိုင်နားက သစ်ပင်ပေါ်က ကျီးနှစ်ကောင် စကားပြောတာ ကြားရသတဲ့... မောင်ကျောက်ကျိုင်းကလဲ .. သူ့ဘကြီးကျောက်ရဲ့ တောတွင်း ဘလော့တွေ ဖတ်ထားတာဆိုတော့ .. ဒီ ကျီးနှစ်ကောင် ပြောတာလောက်တော့ အသာလေး နားလည်တာပေါ့... တကယ်တော့ ဘကြီးကျောက်က ကလေးတွေကို သူ့ကိုယ်တွေ့ ဆိုပြီး ခပ်တည်တည် ဖြီးနေတာ.. တောတိရစ္ဆာန် အကြောင်းဘာမှသိတာ မဟုတ်ဘူး... သူတကယ် သိတာက... ကြက်၊ ဝက်၊ ဖါး၊ ငါးရှဉ့်..အကောင် လေးကောင် လောက်သိတာ၊ အလွန်ဆုံးသိရင် ၃၆ ကောင်ပဲ၊..
ဒါနဲ့ ကျီးနှစ်ကောင် ပြောတဲ့အတိုင်း... မြွေအရေခွံကို. ငါးထောင်တန် တရွက်ပေးပြီး.. ဆုတ်လို့ရတယ်... ဒေါ်လာ တရာတန် ပေးပြီး အလှဖန်တီးရှင် ဒီဇိုင်းနာ.. မာမီ တင်သရမ်းလွန်း ဆီမှာ.. ဗိုက်ပေါ်.. ချက်ပေါ်.. အင်္ကျီချုပ်လို့ ရတယ်.. မြွေရိုးကို ဆံထိုးလုပ် လို့ရတယ်.. ဒါပေမယ့်. မိဖုယားကြီးက မင်္ဂလာဆောင် မှာ ဝတ်တဲ့ စိန်ဆံထိုး လောက်တော့ မကြိုက်ဖူးပေါ့ကွယ်... အဲဒီမေးခွန်းကို မောင်ကျောက်ကျိုင်းလဲ ဖြေပြီးရော မိဖုယားကြီးက.. သူ့ရဲ့ tag question ကို ဖြေပေးတဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်လေး ကို.. ဘလော့ဂါ အပျိုကြီးမမ ကပြောတဲ့လေသံနဲ့ အ.ဟင်း.ဟင်း. သိတ်တော်တာ ပဲကွယ် ငှယ်.. ငှယ်.. ဆိုပြီး.. ဇာတ်ပေါင်း သွားကြသတဲ့ ကွယ်.........
ကိုကြီးကျောက်ခဲရဲ့ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်.......
Posted by ရွှေရတုမှတ်တမ်း at 7:49 PM
ကျွန်တော်ညီ အောင်သာငယ် ကကျွန်တော့ကို ဂမ္ဘီရ blogger ဆိုပြီး လှမ်းပြီး ကြည်စယ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကလည်း ရေးရင်းအရှိန်က ပါလာတော့ ... တဖြေးဖြေးနဲ့.. ဂမ္ဘီရဆရာကြီး ဖြစ်သွားရတော့တာပေါ့..... ကျွန်တော်တို့ ဗမာမဂ္ဂဇင်း လောကမှာလည်း ဂမ္ဘီရလိုင်းက တယ်ခေတ်စားပေသကိုး...
ခုမှတော့ မထူးပါဘူးလေ ... ကျွန်တော် ဗမာပြည်မှာ သိုက်ဆရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေးရမှာပေါ့လေ...
ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေကလဲ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှု အစွဲအလန်းတွေနဲ့ ဘာသိုက် ညာသိုက်နဲ့ စုံစီနဖာပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သိုက်သမိုင်း ရုပ်ရှင်ကား တွေထဲမှာ တာတေကြီး၊ ဒေါ်မြလေး တို့ရဲ့ ဒွေးစွန်ပါသိုက်၊ ကျီးကန်းပါးစပ်သိုက်၊ မြစိမ်းသိုက် စတဲ့ သိုက်သမိုင်း ဇတ်ကားတွေ ကြည့်ခဲ့ရတာတော့ မှတ်မိပါသေးတယ်... ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဒေါ်မြလေးက စုန်းမကြီးဆိုတော့ ထမိန်ခြုံလိုက် လဒဖြစ် ပျံသွားလိုက်... တာတေကြီးက သိုက်စောင့် ဘီလူး သရဲ၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေက ခင်မောင်ညွန့်တို့ ကြည်ကြည်ဌေးတို့.. သိုက်ဆရာက ခေါင်းပေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး ကားကားနဲ့ သိုက်ဖွင့်မယ် ဆိုတော့ သိုက်ကြိုးချုပ်ပြီး.. မြေကြီးကို ကြိမ်နဲ့ ရိုက်လိုက်.. ဥစ္စာစောင့် မင်းသား မင်းသမီးတွေခမြာ နာလို့ဆို အော်လိုက်ကြ.... ဟော..... သိုက်ဆရာလည်း မနိုင်ရော.. သိုက်ဆရာနဲ့ တပည့်တို့ မြေပြင် ရေထင်ပြီး ကူးနေကြရတာ ကလေးတုန်းက ကြည့်ပြီး အလွန်ကြိုက်ပေါ့ဗျာ....
ကြည့်ပြီးပြန်လာရင် .. တယောက်ထဲ အဲဒီဇတ်ထုပ်ကို အိမ်မှာ ပြန်ခင်းနေတာ..... ဘွားအေကြီး ထမိန်ကို ယူခြုံပြီး ပျံကြည့်လိုက်... အဲ.. လဒတော့ မဖြစ်ဘူး ထမိန်ခြုံထားတော့ မမြင်မစမ်းနဲ့ ကွပ်ပျစ်ပေါ်က လိမ့်ကျပါရောလား..... တယောက်ထည်း character အမျိုးမျိုး လုပ်ရတာ ဆိုတော့... တခါ သိုက်ဆရာ ဆိုပြီး.. ကြိမ်လုံးနဲ့ မြေကြီးကို တဗျမ်းဗျမ်း ရိုက်လိုက်တာ... ဘေးနား ၀ပ်နေတဲ့ ကြောင်လေးလဲ လန့်ပြီး ထွက်ပြေးသွားပါလေရော..... အို..... ကိုယ်ကတော့ .. သိုက်စောင့် တာတေကြီး ပြေးပြီဆိုပြီး သဘောတွေကျလို့.....
ဟော... ဒီသိုက်တွေနဲ့ ရေစက်ဆုံချင်တော့...စစ်ကိုင်းတိုင်း ကောလင်းနယ်က ရှမ်းကလုံး ဒေသမှာ.. field ဆင်းရချိန်မှာ.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိုက်ဆရာ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ.... သိုက်သမိုင်း ကားတွေထဲက သိုက်ဆရာလို ဆေးကြိမ်လုံး ကိုင်ပြီး ခေါင်းပေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်.. ကိုယ့်ရုပ်ကို သိုက်ဆရာ လူဆိုးပုံတော့ မပေါက်ဘူး ဆိုပြီး မှတ်ချက်ကလဲ ချရသေးတယ်.. ခေတ်သစ် သိုက်ဆရာ ဆိုတော့... သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့ တူနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ လက်တို လက်ရှည်တွေ ၀တ်ပြီး ဥပဓိရုပ်ကလဲ ဓါတ်ရှင် မင်းသားလိုလို.. (မယ်ကိတို့ မယ်စင်တို့ ပြောစကားအရဆို... ကျော်ဆွေ နဲ့ ဒွေး နှစ်ယောက်ပေါင်းဆိုပဲ ) ဒါ သူတို့ မှန်တာ ပြောတာ ဖြစ်မှာပါလေ... ဒီကလေးမလေး တွေက အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်တတ်တယ်...
ကျွန်တော် ရှမ်းကလုံးကို ရောက်သွားတော့ ၀ါးခေါက်တောကုန်း စခန်းမှာ သွားနေရတယ်.. ၀ါးခေါက်တောကုန်းကို အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ အဖွဲ့သားတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ရဲတွေက ၀ါးခေါက်တောကုန်းရဲ့ ဥစ္စာစောင့် ညီမလေးဖေါ်ဇတ်ကို ပြောကြတော့တာပါပဲ...... အဖြစ်အပျက်လေးက ဒီလိုခင်ဗျ... ညနေ နေ၀င်ရီတယော အချိန်မှာ.. လှည်းဝင်ရိုးသံ တအီအီနဲ့ ၀ါးခေါက်တောကုန်းပေါ်ကို လှည်းတစီး မောင်းတက်လာသံ ကြားရပါသတဲ့ ဒါပေမယ့် လှည်းဝင်ရိုးသံသာ ကြားနေရတယ် လှည်းကိုတော့ မမြင်ရပါဘူးတဲ့ လှည်းသံ ရပ်သွားချိန်မှာတော့.. လှလှပပ ၀တ်စားထားတဲ့ ညီမလေးယောက် ကိုဝါးခေါက်တောကုန်းက ကျွန်းတောကြားမှာ လမ်းသလားနေကြတာ.. မြင်ရပါသတဲ့.. ဒီကောင်မလေးတွေနောက် လိုက်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့အခါ ကျွန်းပင်ကြို ကျွန်းပင်ကြား ပျောက်ပျောက် သွားကြပါသတဲ့၊ ဒီ ညီမလေးဖေါ်ကို ဘယ်သူမှ ဖမ်း မမိကြလို့ လက်လျော့ ထားရပါသတဲ့... တော်တော်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသား... ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေ နဲ့ ညိလိုက် ရင်တော့ သူတို့ဆီက ရွှေတွေ ငွေတွေတောင်း.... ဘ၀ချင်း မတူလို့ပါ ဆိုပြီံး ဘာညာ သာရကာတွေ ပြောပြီး ရန်ကုန်ကို ရွှေထုပ်ကြီးနဲ့ ပြန်လာယုံပဲ...
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ၀ါးခေါက်တောကုန်းမှာ ၄ လနေခဲ့ပေမယ့် ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေနဲ့ မကြုံခဲ့ရပါဘူး .. သို့ပေမယ့် ၀ါးခေါက်တောကုန်းမှာ ထူးခြားချက် တခုတော့ရှိတယ်.. ရှမ်းကလုံးရွာ ပင်မစခန်း နဲ့ တခြား စခန်းတွေမှာ အရက် ဘယ်လိုသောက်သောက် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့်.. ၀ါးခေါက်တောကုန်းပေါ်မှာ အရက်သောက်လို့ မရဘူး သောက်ရင် အမြဲ ပြဿနာ ဖြစ်တယ် .. မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက.. အဲဒိနေ့က ငှက်ဖျား ထချင်သလိုလို ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်တာနဲ့ ငှက်ဖျားဆေးနဲ့ အရက်တ ခွက်ပဲ သောက်ပြီး အိပ်ယာထဲမှာ ကွေးနေတာပါ.. သောက်တာကလဲ သွေးနွေးယုံ နဲနဲပါပဲ.. တခြားမူးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘာလို့မှန်း မသိ ကျွန်တော်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ.. အားလုံးက ၀ိုင်း ဆွဲကြတော့ မူးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ဧရာမ ထင်းတုံးကြီးနဲ့ ကျွန်တော့ခေါင်းကို ရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်တာတောင် ခေါင်းမကွဲ ခေါင်းမပေါက် ဘာမှမဖြစ်... ခေါင်းမာတယ်ဆိုတာ.. အဲသလိုမျိုးကို ခေါ်တာနဲ့တူပါရဲ့......
.အဲသည် ၀ါးခေါက်တောကုန်းသိုက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိုက်ဆရာတွေေ၇ွှတွေ ငွေတွေတော့ ရကြပါတယ်... ရှမ်းကလုံး ရွာသားတွေက ၀ါးခေါက်တောကုန်းမှာ ရွှေတူးချင်ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့နဲ့ လာရောက် ညှိနှိုင်းပြီး ရွှေတွေတူးပြီး ဝေစုခွဲကြတာပါပဲ... တကယ်တော့.. ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကျိုး ရှာခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါလား.... ခု ..ပြန်စဉ်းစား မိတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလီဘာဘာ ဂိုဏ်းဝင် တယောက် ဖြစ်ခဲ့ရသလို စိတ်မသက်သာ ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ.... အဲဒီတော့.. ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ရတဲ့ငွေ မဟုတ်လေတော့... မသန့်ရှင်းတဲ့ငွေဟာ .. မသန့်သလိုပါပဲ.... ကျွန်တော်တို့ ဝေပုံကြရတဲ့ ငွေတွေဟာ ၇၅ိ တန် ၃၅ိ တန်တွေ တရားမ၀င် ကြေငြာချိန်မှာ... စက္ကူတွေ ဖြစ်သွားတာပါပဲ..... ပါနီထဲကငွေ ပါနီထဲ ပြန်ရောက်တယ်ပဲ ပြောရမလား... သိုက်ဆရာတွေ.. သိုက်ပစ္စည်း မစားထိုက်ဖူးပဲပြောရမလား.....
တော်ပါသေးရဲ့ ... သိုက်သမိုင်းကားထဲ သိုက်ဆရာတွေလို... မြေပြင်မှာ ရေထင်မကူးခဲ့ရလို့..........
မြန်မာပြည်တောနက်တွေထဲမှာ လှည့်လည်ပြီး field ဆင်းရင်းနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ တောတွင်း အတွေ့အကြုံ တွေထဲမှာ တောမှားတာတွေ၊ တောချောက်တာတွေ၊ တောမှောက်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
တောမှားတာကတော့ တောထဲမှာမျက်စေ့လည် လမ်းမှားနေတာပါပဲ၊ သံလိုက် အိမ်မြှောင်နဲ့ ချိန်ပြီး ကိုယ်သွား လိုရာကို ဦးတည် သွားနေပေမယ့် ဘယ်လိုသွားသွား ဒီနေရာပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ တ၀ဲလည်လည်နဲ့ ပြန်ရောက် နေတတ်တာမျိုး.. အဲသည်လို အတွေ့အကြုံကို ကောလင်း၊၀န်းသိုနယ်မှာ field ဆင်းရင်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်..။
တောချောက်တာကတော့..... ပဲခူးရိုးမထဲ မလေးတောင်မှာကြုံခဲ့ရတာပါ၊ ... နေ့ခင်း ကြောင်တောင် ရုတ်တရက် အမှောင်ကြီး ကျပြီး...... လေမတိုက်... သစ်ရွက်တွေလည်း မလှုပ်ပဲ.....တောကြီးတခုလုံး မုန်တိုင်းကျသလို..... တဝေါဝေါနဲ့.... ဆူညံနေတာပါပဲ၊ မှောင်သွား လိုက်တာကလဲ...... နေ့ခင်း ကြောင်တောင်ကြီးမှာ .. ညသန်းခေါင် လိုကို မှောင်သွားတာ.... ပဲခူးရိုးမ မလေးတောင်မှာ field အတွေ့အကြုံလေးထဲက ပျော်စရာ..... အံ့သြစရာလေးတွေ.... နောင်ကြုံရင် ရေးပြပါဦးမယ်....
တနင်္သာံရီတောထဲက မနိုး ရုံးတောင် တ၀ိုက်မှာ မျက်စေ့ မှောက်မှားအောင် နာနာဘာဝရဲ့ တောစီး ခံရတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် အကြောင်းကိုတော့ မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံခဲ့ရတာမို့ အံ့သြလွန်းလို့ ရေးပြပါရစေ....... တနင်္သာံရီ ကုန်းတွင်းပိုင်း ဒေသကို field ဆင်းကြတော့ တနင်္သာံရီ ကမ်းရိုးတန်းပိုင်း မြိတ်ကျွန်းစုတွေမှာ field ဆင်းကြတဲ့ အဖွဲ့တွေ လည်းရှိပါတယ်...ဧရိယာခြင်း နီးနီးနားနား field ဆင်းကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ စာရေးဆရာ ကိုရိုးကွန့် အမည်ခံ သူငယ်ချင်း ခင်မောင်ဦးလည်း ပါပါတယ်.. ခင်မောင်ဦး က ကာတွန်း ဆရာ အော်ပီကျယ် ရဲ့ အကို အရင်းဖြစ်သလို.. ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးကိုအောင်နဲ့ ကလဲ မယားညီအကို တော်ကြသူတွေပါ...
တနင်္သာံရီဒေသမှာ field ဆင်းကြတော့ အခြေစိုက်စခန်းက မြိတ် မှာပါ၊ မြိတ် ....ဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံး စ သတိရတာ မောရစ်ကောလစ်( Maurice Collis ) ပါပဲ....မောရစ်ကောလစ် ရဲ့ She wasaQueen ,Sanda Mala တို့ဟာ သူရဲ့ သူရဲ ချောက်တယ် ဆိုတဲ့ မြိတ်က အရေးပိုင် အိမ်မှာ ရေးခဲ့တာပါ.. ကျွန်တော် ကတော့ အမေ လူထု ဒေါ်အမာ ရဲ့ ဘာသာပြန်ပဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်.... နှမငယ် မကေက ကျွန်တော်ကို မောရစ်ကောလစ် လို အမှုထမ်း ဘ၀နဲ့ ကြုံရတဲ့ သရဲ ချောက်တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ ရေးဖို့ မြှောက်ပေးပါတယ်... (လူကြီးကို သက်သက် အချွန်နဲ့ 'မ'တားD ) အခု blog ရေးနေကြတဲ့ ညီငယ် နှမငယ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘူမိ ညီအကိုမောင်နှမ တွေလဲ ပါကြပါတယ်၊ ညီငယ် အောင်သာငယ်၊ နှမငယ် ချိုသင်း နဲ့ မကေ တို့ ပါ ...ကျွန်တော့ ညီ နဲ့ နှမတွေက သာမန် ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်ရိုင်းတွေ မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး.. အဖိုးတန် ကျောက်မျက်တွေလို စာပေ အနုပညာ အရောင် တောက်ပြောင် နေကြပါပြီ..
ကျွန်တော့ကိုတော့ ကျွန်တော့ညီ နဲ့ နှမ ကျောက်ခဲလေးတွေက....boulder ကြီး...တဲ့...boulder ဆိုတော့ ဧရာမ ကျောက်တုံးကြီး ပေါ့ဗျာ.......ဟဲ..ဟဲ... boulder ကိုလဲ အထင်တော့ မသေးကြပါနဲ့.. ရတနာသုံးပါး ထဲက အမြတ်ဆုံး ဘုရား ရတနာရဲ့ ဆံတော်ရှင် နဲ့ ဓါတ်တော် မွေတော်တွေကို ထမ်းရွက်ထားတဲ့ Granite boulder ( နှမ်းဖတ် ကျောက်တုံးကြီး)ဟာ မွန်ပြည်နယ် အစ ပေ ၃၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာ ရှိပါတယ်.. ဒါလောက်ဆို ခန့်မှန်း နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်.......
ကဲ.. ကဲ.. လိုရင်းကိုပဲ ပြန်ကောက်ရအောင်... မြိတ် ရောက်တုန်း အမှတ်တရ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေကတော့ ... မောရစ်ကောလစ် ရဲ့ မြိတ်က အရေးပိုင် အိမ်ကြီး နဲ့ ပင်လယ် ဓါးပြဗိုလ် Siamese White ရဲ့ မိန်းမ မေရီပိုဗေး ရဲ့ အုတ်ဂူတွေပါ... ကျွန်တော် ရောက်ချိန်က ဆရာ မြသန်းတင့် ကလည်း ငွေသောင်ယံ ဟွန်ဒါ ယဉ်ကျေးမှု မေရီပိုဗေး နဲ့ အီကွေတာညများ ဆိုတဲ့ အခန်းဆက် ဆောင်းပါးရှည်ကြီးကလဲ ရှုမ၀ မဂ္ဂဇင်း မှာ ဖတ်မငြီးအောင် ပါနေတော့ လွမ်းစရာလေးတွေပေါ့......
တနင်္သာံရီ ဒေသမှာ ကွင်းဆင်းကြတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို မြိတ်က ခလရ ၁၇ ကတာဝန်ယူပြီး လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် .... အဲဒီအချိန်က တနင်္သာံရီတိုင်း ဆိုတာ အမဲရောင် ဒေသက ခပ်များများကို ... ရှေ့က point တဖွဲ့ထွက် အလယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ နောက်မှာ လုံခြုံရေး တဖွဲ့ ... အဲသလို ထွက်ကြရတာပေါ့ ခင်ဗျာ... တောထဲမှာ မြေမြှုတ်မိုင်းတွေကလဲ ရှိတော့ တခါတလေ ချောင်းထဲကနေ ကမ်းပေါ်တောင် မတက်ရဲပါဘူး... တက်လိုက်ရင် ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ဘယ်လိုက် ကောက်ရမှန်း မသိပဲ ဖြစ်သွားမယ်လေ.......
မြိတ်ခရိုင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အရှေ့ပိုင်း မနိုးရုံးတောင် ဟာ အဲဒီ တ၀ိုက် မှာတော့...... အမြင့်ဆုံး.... တောလဲ အနက်ဆုံးပါ....... ရွာစဉ် ရွာဆက်ကလည်း သိတ်မရှိတော့ ... တကယ့် တောရိုင်း ဒေသလိုပါပဲ..... အရင်ကတော့ ဆူမာတြာ ကြံ့လို သတ္တ၀ါတွေတောင် ခိုအောင်း နေထိုင်ကြဖူးသတဲ့... နယ်မြေ လုံခြုံရေးက စိတ်ချရတော့ ... အေးအေး ဆေးဆေးပါပဲ ကျီးလန့်စာစား field ဆင်းစရာ မလိုဘူးပေါ့လေ...... field က အပြန်လဲ.. စကား တပြောပြောနဲ့ နောက်ရင်း ပြောင်ရင်း ပြန်လာကြတာပေါ့... စခန်း ရောက်ခါနီး မိုင်ဝက်လောက် အလိုမှာတော့ အဖွဲ့သား ကိုညွန့် တယောက် လမ်းဘေး အပေါ့သွားရင်း ကျန်နေခဲ့တာ ဘယ်သူမှ သတိ မထားလိုက်မိဘူး.... အကုန် စခန်းရောက်ပြီး ရေချိုးကြ နားနေကြတော့လည်း သူ့ကို ရေချိုးသွားတယ်ပဲ အောက်မေ့ပြီး... သတိ မထားမိကြဘူး၊ ... ဒီလိုနဲ့........ ဖဲရိုက်သူရိုက် စကားပြောသူပြော နေကြတုန်း........... စခန်းထဲကို.. ဧရာမ ဆတ်ကြီး တကောင် ၀င်လာတာ မြင်ကြရတာပါပဲ........ ဆတ်ကြီးကလဲ ကြီးလိုက်တာ....... ဆတ်နဲ့တောငf မတူဘူး..... ဒိုင်နိုဆော ပေါက်စ ကြနေတာပဲ.. ဒီအချိန်မှာ .... လုံခြုံရေး လိုက်လာတဲ့ ရဲဘော်လေးက ဟာ....... ဆတ်ကြီး.... ဆတ်ကြီး........ ဆိုပြီး သေနတ်နဲ့ ကောက်ပစ်မလို့လဲ လုပ်ရော....... အတွေ့ အကြုံ ရှိတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးက ဟာ... မလုပ်နဲ့.... မလုပ်နဲ့... ဆိုပြီး သေနတ်ကို ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်၊ အဲသည် အချိန်မှာပဲ ဆတ်ကြီးက.............
ဟေးးးးးးး........ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရ အော်ရင်း.... ကိုညွန့် ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရတော့တာပါပဲ.... ကိုညွန့် ခမျာ အပေါ့ သွားရင်း တောထဲမှာ မျက်စေ့လည်ပြီး တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေရာက စခန်းကို ပြန်ဝင်လာချိန်မှာ... မကောင်းဆိုးဝါး နာနာဘာဝက သူ့ကို ဆတ်ကြီးအဖြစ် စီးနင်းဖန်ဆင်းပြီး လိုက်လာတာကို.... သူက စခန်းရောက်လို့ အားရ၀မ်းသာ ဟေး..... ဆိုပြီး အော်လိုက်တော့မှ... သူ့ရဲ့ မူလရုပ်သွင် ပြန်မြင်ရတော့တယ်။ ကံကြီးလို့သာပေါ့... တပ်ကြပ်ဆရာကြီးကလဲ ခြေမြန် လက်မြန်နဲ့ အတွေ့ အကြုံ ရှိလို့သာ.. နို့မို့ရင် သေနတ်စာ မိပြီး လောက်ပြီပေါ့...
တောကြီးမျက်မဲမှာ နာနာဘာဝတွေ ကမျက်စေ့မှောက်အောင် .. ဖန်ဆင်းပြတာ ဒီတခါပဲ မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံခဲ့ဖူးတာပဲ.........
Posted by ရွှေရတုမှတ်တမ်း at 10:47 PM